Ekupheleni kukaSeptemba, kwaziswa umnxeba ophakathi ophakathi kuXiaomi. Sithetha ngeXiaomi Redmi Qaphela 6 Pro, ifowuni ebonakala ukuba yeyokuqala kweleshayina uphawu lokuba neekhamera ezine. Kwinqanaba lenkcazo yimodeli elungileyo, njengoko sele siqokelele kweli nqaku. Kwaye le fowuni ngoku ifika ngokusemthethweni eSpain, njengoko uphawu lwesiTshayina uqobo lwalo sele lubhengezile.
Imakethi yaseSpain iye yaba yenye yezona zinto zibalulekileyo kwimveliso yaseTshayina. Ke ngale Xiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro bafuna ukugcina umzuzu wabo olungileyo. Njengesiqhelo, yimodeli eneenkcukacha ezilungileyo kunye nexabiso elinomtsalane.
Le modeli ibonakala ngokukodwa ukuba yeyokuqala kwikhathalogu ebanzi yohlobo lwesiTshayina ekubeni nekhamera engaphambili kabini. Kule meko sinokubona ukuba ikhamera ibekwe kwinotshi yesikrini. Apho sifumana le lens iphindwe kabini ye-20 + 2 MP yesikhundla. Umva uphinde ube yi-12 + 5 MP.
Sifumana iinguqulelo ezimbini zale Xiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro ngokwe-RAM kunye nokudityaniswa kwangaphakathi kokugcina. Enye yazo sele ifumaneka kwilizwe lethu ukusukela namhlanje. Inguqulelo yefowuni ene-3/32 GB sele ikhona, kwiivenkile zebranti, kunye namanye amanqaku athengiswayo kwi-Intanethi, ngexabiso le-199 euro.
Inguqulelo yeXiaomi Redmi Qaphela 6 Pro ene-4/64 GB sele isungulwe ngokusesikweni kwiivenkile zorhwebo lwaseTshayina, ngexabiso le-249 euro. Nangona ayizukufika de kube ngu-Novemba 11 xa kunokwenzeka ukuba uyifumane kwezinye iindawo zentengiso, ngaphandle kwevenkile yohlobo lwaseSpain.
Ifowuni enokuthi ithengise kakuhle. Le Xiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro yimodeli eneenkcukacha ezilungileyo. Ukongeza, inyani yokuba yeyokuqala ngekhamera ephindwe kabini iqinisekile ukunceda ukuvelisa umdla kubathengi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » IXiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro ifika eSpain ngokusemthethweni
Uyenza njani imo yokuGcina ibhetri kwi-Android kwaye yenzelwe ntoni